February 5, 2018 February 6, 2018 Rochak JankariChinese mom, sold milk
यो पनि पढ्नुहोस् : बिबाह अघि यौन सम्पर्क नगरुन भनेर योनि सिलाइदिने परम्परा !
गुवाङ्डुङ प्रान्तको ठूलो सरह शेन्जनस्थित एक बच्चाको पार्कमा खिचिएको भिडियोमा आमाले भनेकी छन्- ‘म जतिसक्दो चाँडो पैसा जम्मा गर्न मेरो दूध बेचिरहेकी छु। बुबा भन्छन्- अस्पतालमा एक लाख युआन तिर्नुछ। डाक्टरले भनेका छन् कि बच्चीको उपचार लगत्तै रकम भुक्तानी गरिहाल्नुपर्छ
BBC का अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको स्वास्थ्य व्यवस्थामा प्रश्नहरू उठेका छन् किनभने यहाँका मेडिकल सेन्टरमा चाप बढेको छ र चाँडो पालो पाउनका लागि मानिसहरू अतिरिक्त रकम पनि तिर्न थालेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : रत्नपार्कका यौनकर्मी भन्छन " पुलिस सँग त पुरै सेटिंग हुन्छ "
यो पनि पढ्नुहोस् : १३० श्रीमतीका पतिले संसार छोडे !
आफ्नै छोराबाट ज्यान जोगाउन मुस्किल !
‘देउताको डर’ ले त्रशित हुम्लाका महिला !